​समस्याचाहिँ घुमिफिरी हामीसँगै
१२ आश्विन २०७६
विकास, निर्माणका काममा सहयोग गर्ने विदेशी प्रतिबद्धता त भटाभट आएका छन् । तर, समस्या हामीसँगै छ । हतारमा काम गरिन्छ तर परिणाम खासै देखिन्न ! काठमाडौं वरपरका १७ वटा सडक बनाइहाल्नुपर्ने छ । उनै शारदा अधिकारीले धेरै ठेक्का हात पारेका छन् । त्यसमाथि मेलम्ची खानेपानीको अवरुद्ध काम सम्पन्न गर्ने नयाँ ठेक्काका लागि उनै प्रस्तावित भएका छन् । चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणअन्तर्गत असोज १ बाट काम… विस्तृत समाचार
उत्तरका नेताबारे दक्षिणको चासो बढ्दा चेपुवामा परेको छ, सत्तारुढ नेकपा । स्कुल विभागद्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओलाई उद्घाटन गराउने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रहेको सूचना पाएपछि दक्षिणी दूतावासले आफूनिकट पत्रकार र बुद्धिजीवीसामु घुमाएर चासो राख्यो, ‘के यो मिल्ने कुरा हो ?’ उसको सोधाइ थियो, ‘एउटा पार्टीको प्रशिक्षण उद्घाटन अर्को देशको नेताले गर्न सुहाउँछ ?’ कुरा नेकपा नेतृत्वसम्म पुग्यो । त्यसपछि… विस्तृत समाचार
​दिइसक्यो, अब के दिने ?
दिन्छु भनेको कुरा दिइसकेको साथीसँग फेरि माग्ने मौका आउँदा अब के भन्ने ? चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको असोज अन्तिम साताका लागि तय भएको काठमाडौं भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो अन्यौल आएको हो । ०७२ को भूकम्पपछि दातृ समुदाय बोलाएर प्रतिवद्धता गरिएको अनुदान सहयोगमध्ये २५ प्रतिशतको अत्तोपत्तो छैन । त्यसमध्ये भारतबाट एक खर्बको प्रतिवद्धता आएकोमा २५ अर्ब दिइसक्यो । त्यो शुद्ध अनुदान हो । बाँकी ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत… विस्तृत समाचार
​चीन, चेली र यौनधन्दाको चक्कर
४ आश्विन २०७६
एकातिर काठमाडौंमा चिनियाँ यौनकर्मी महिलाको बढोत्तरी, अर्कातिर नेपाली युवतीलाई विवाह गरेर लैजानेहरूको बाक्लो हिँड्डुल ! यसक्रममा तीन साताअघि नेपाली युवतीलाई चीन पठाउने गिरोह त प्रहरी नियन्त्रणमा आयो । तर, चिनियाँ युवतीलाई काठमाडौं ल्याएर यौन व्यवसायमा संलग्न गराउने गिरोह भने अहिलेसम्म पहुँचबाहिर छ । बरु, नेपाली चेली चीन पठाइने धन्दाको भित्री पाटोको खुलासा हुन थालेको छ । चिनियाँ पतिको निधनपछि सिन्धुपाल्चोक, थानपालकी रिना तामाङ (बिबिरानी) का… विस्तृत समाचार
आफ्ना मान्छेमा गए अझ आपत
सरकारले जताततै बिच्क्याउँदै जान थाल्यो भने राजा ज्ञानेन्द्रकै पालामा मानवअधिकारतर्फ ‘ए ग्रेड’ पाएको नेपाल त्यो स्थानबाट खस्किने खतरा सन्निकट छ । द्वन्द्वका अवशेषलाई निमिट्यान्न पार्न गठन हुनुपर्ने दुई आयोगमा ठूला दलबीचको सहमति लादेर सिफारिश समितिलाई बुँख्याचा बनाउन खोजिएपछि नयाँ विवाद जन्मिएको हो । पीडित र मानवअधिकारवादीको तर्फबाट सत्य निरुपण र बेपत्ता छानवीन आयोगमा पुराना मान्छे नदोहो¥याउने आग्रहविपरित ठूला दलहरु हाम्रा र राम्रा मान्छेकै खोजीमा जुटेसँगै… विस्तृत समाचार
डक्टर बन्न अनेक दाउ
नेपालकै सबभन्दा राम्रो भनी ख्याति कमाएको काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधिप्राप्त विद्यार्थीको थेसिसमै कैफियत भेटिएपछि ‘मन परेको केटो जेठाजु परेछ’ भनेजस्तै भएको छ । डाक्टरको उपाधि लिन दुई विषयमा स्नातकोत्तर वा एमफिल गरेको हुनपर्ने प्रावधान छ । सोहीबमोजिम विशालकुमार भण्डारीले पनि भर्नाअघि दुईवटा स्नातकोत्तर र दुईवटै थेसिस सकेको विवरण पेश गरे । विद्यावारिधि प्राप्त गर्ने अन्तिम चरणमा पुग्दा पो उनले झुक्याएर पूर्वाञ्चल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एउटै थेसिस… विस्तृत समाचार
जसलाई त्यो सन्धिले जान्दै जान्दैन
जनसरोकार जोडिएका ठूला परियोजनामा प्रधानमन्त्रीले चासो बढाउँदै छलफल, तयारीमा पनि आफैँ जुट्न थाल्नुभएको छ । वर्षौंदेखि भारतले बनाउने भनी अहिलेसम्म त्यसै थन्किएको परियोजना हो, पञ्चेश्वर बाँध । यही विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले झलनाथ खनाल र प्रचण्डसहितका दुई पूर्वप्रमलाई साथै राखेर कर्मचारी र विशेषज्ञसँग ब्रिफिङ लिनुभएको छ । ०६६ मंसिर ९ मा दुबै देशका जलस्रोत सचिवको बैठक राखेर पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तथा… विस्तृत समाचार
​सेनाले पठाए पनि जुटेन सहमति
एक–दुई जनाको झेली शैक्षिक प्रमाणपत्रको झमेलाका कारण सेनामा अरुको सरुवा प्रभावित भएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानवीन नटुंगिँदै अशोक सिग्देलहरुको बढुवा प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालय पठाइएपछि विभिन्न पृतनामा काज खटिएका अरु जर्नेलहरुको दरबन्दी मिलानसमेत रोकिएर बसेको हो । पूर्वी पृतनापति अनन्त कार्कीसहित पश्चिम पठाइएका सरोजप्रताप राणा र सुवर्ण शाहहरुको दरबन्दी र विदेशमा तैनाथ कर्णेलहरुको बढुवा यसैको शिकार बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको सिंगापुर बसाईका कारण जंगी अड्डाको… विस्तृत समाचार
​व्यापारीबीच फेरि अर्को बबाल
सरकारले हतारमा गरिएको निर्णयका कारण फेरि अर्को झण्झट व्यहोर्नुपर्ने स्थिति बन्दैछ । यसअघि यातायातको सिण्डिकेट, प्यान फर अलजस्ता आवश्यक तर पूर्वतयारीबिनाका योजना ल्याउँदा झमेलामा परेको थियो । अहिले फेरि नयाँ विवादको विजारोपण भएको छ । सम्पत्ति जाँचबुझसम्बन्धी प्रावधानका कारण व्यापारीको निदहराम भएको हो । मूल ऐनलाई नियमावली र निर्देशिका लगाएर काट्ने काम हुँदा सरकारको थाप्लोमा नयाँ समस्या आइपरेको बताइन्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले २५ गतेसम्म… विस्तृत समाचार
​‘पीएचडी’ बीचमै पदच्युत
सरकार आउने\_बद्लिने, मान्छे हट्ने\_हटाउनेअन्तर्गतका कामहरु जारी छन् । नाम पनि कस्तो भने, ‘पिएचडी’, अर्थात् विद्यावारिधी सिग्देल । जसरी सेनाका जर्नेल थिए, बिएकुमार शर्मा । उनका बाबुले बिए पास गर्दा जन्मिएका कारण त्यस्तो नाम रहन गएजस्तो एकजना छन्, विद्यावारिधी सिग्देल । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा एनआइडिसी बैंक गाभिएपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त भएका कास्केली । अहिले सरकारले उनलाई दुई वर्षमै निकालेर त्यहाँ त्रिविसेवाबाट अवकाशप्राप्त… विस्तृत समाचार